Misokatra ho an'ny dia iraisam-pirenena i Nosy Be Be
Home » etn » Misokatra ho an'ny dia iraisam-pirenena i Nosy Be Be
Septambra 15, 2020
Ny governemanta Madagasikara dia nanambara fa hisokatra indray ny nosin'i Nosy Be ho an'ny dia iraisam-pirenena amin'ny 1 Oktobra 2020. Vonona handray ireo mpitsidika iraisam-pirenena sy hanao fizaham-pahasalamana ilaina ny seranam-piaramanidina Fascene any Nosy Be. Ny mpandeha rehetra dia mila manolotra tapakila miverina ary tsy mahazo mivoaka ivelan'ny Nosy Be.
Ny fitsapana COVID-19 ratsy (PCR sy / na serology) dia ilaina amin'ny fidirana, ary napetraka ny fomba fizahana fahasalamana amin'ny seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo fidirana hafa. Omena fitsapana maimaimpoana ao amin'ny seranam-piaramanidina rehefa tonga. Ilaina ny quarantine 14 andro.
Ho an'ny fanitarana visa maimaim-poana (30 andro azo havaozina noho ny fanidiana), ny mpitsangatsangana dia tokony hankany amin'ny biraon'ny Ministeran'ny Atitany, ny fifindra-monina / ny fifindra-monina. Izay mihitsoka eto Madagasikara ihany no mihatra amin'izany noho ny fampiatoana ny sidina sy ny fameperana ny dia.
Niverina indray ny dia an-trano eto Madagasikara ny volana septambra 2020 ary antenaina hiverina indray ny dia iraisam-pirenena rehefa misokatra indray ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato eto Antananarivo ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena. Manidina ho any amin'ny toerana itodiana izao ny Ethiopian Airlines.
Mbola eo ambanin'ny State of Emergency Health i Madagasikara. Ny isan'ireo tranga vaovao isan'andro dia nidina avy any amin'ny haavon'ny volana jolay ary mijanona ho matevina tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Mihena ny famerana ny dia eto Madagasikara fa sidina iraisam-pirenena mijanona mihantona.
Misokatra hatramin'ny 6 hariva ny fivarotana enta-madinika. Nahena ho 11 PM ka hatramin'ny 4 maraina ny ora famandrihana eto an-drenivohitra. Voarara ny famoriana olona mihoatra ny 50. Tsy maintsy atao ny manao saron-tava imasom-bahoaka. Ny tsy fanaovana sarontava misarom-bahoaka dia mety hisamborana mandritra ny 24 ora.
Miasa ny fitateram-bahoaka ary omena gel tanana. Ny mpandeha sy ny mpamily ary ny mpanampy dia tsy maintsy manao sarontava avokoa. Misy famerana ny fivezivezena eo amin'ny samy faritra na onenana.
Tsy mahazo miditra eto Madagasikara ny olom-pirenena amerikana.
Ny sidina Air Astana dia manohy mankany Uzbekistan sy Kyrgyzstan
IGLTA dia namindra ny Fifanarahana eran-tany tamin'ny 2021 hatramin'ny septambra